Ten Vitamin D Deficiencies Symptoms
What UMNO Must Stop Doing..
Bagaimana syarikat Khairy dapat kemudahan kewangan Bank Pertanian
သံတွဲမြို့အား ဆူပူရန် လှုံ့ဆော်နေမှုအပေါ် သမ္မတကြီးထံသို့ တိုင်ကြားစာပေးပို့
Musa Hitam: Negara Takkan Bangkrap Sekiranya Pakatan Memerintah
Petition To Amend Milk Identity And To Add Aspartame In Milk and 17 Dairy Products
Koma Dah Minum Petanngg..awaok dah sudaah??
Aquarium Therapy Soon For The Poor In Petaling Jaya
Lord Buddha is recognized and respected by Islam asaHoly Prophet (Peace be upon him)
Dr Manuty Dedahkan KPN Akui Pakatan Rakyat Mungkin Tawan Putrajaya
Posted: 12 Mar 2013 03:30 PM PDT
Thanks to Mr SKT who shared the following video clip on Hangzhou, China. I have yet to go to China but hope that I can visit Xian, Beijing, Zhuijaikuo, Li-Jiang, Shanghai, Kunming, Guilin andafew other places one day. In the mean time, I have to be satisfied with armchair tours via the Net.
This particular video clip is produced with much artistic flair, expertise and professionalism.
Posted: 12 Mar 2013 08:00 PM PDT
Posted: 12 Mar 2013 07:12 PM PDT
We always hear of the sometimes frustrating treatment..
When so and so apply for government help or recommendations or projects or concessions, that lucky bugger can easily get the approval.
Why? He/she has the right connection!
Or had tug the right strings.
Or had piggy back with influential royal members..
Or had some big shots name tagged along with the proposal.
Countless of reasons that are seemingly unfair and preposterous!
We're human..It's natural to be selfish.
Nevertheless, the economic pie is so huge.. no one should feel sidelined!
Do not keep giving to the same old face countless of times while others drool and watch heart breakingly..this is really agonizing.
Our BN leaders must help as many applicants as possible.
There are times when rigid rules for certain quarters must be made flexible based on sympathy and logical circumstances..
For during general elections, these are the precious masses of votes that will come back to convey their thanks for helping their families.
We want BN to win..landslide win if possible..Ameen.
But do not forget to help those who are in need of study loans, those pensioners who need to pay their medical bills and quiteanumber of forgotten 1 Malaysia rakyat who are suffering in silence.
Enough of endless frenzied selfish no tomorrow shopping by our BN leaders and their families.
Especially from UMNO.
Vote for BN..vote for UMNO.
But vote for the change in attitudes and super living by our arrogant leaders and their families.
And vote to destroy money politics too during UMNO Bahagian elections.
There will then be an increase in trustworthy and reliable leaders who can serve the majority folks with deeper sincerity and kindness..
Bagaimana syarikat Khairy dapat kemudahan kewangan bank Pertanian ?
Telah di perolehi satu set laporan penyiasatan forensik kewangan yang melibatkan hampir 20 orang pimpinan Bn termasuk anggota Kabinet. Laporan forensik kewangan ini merakam 'salah laku' atau masalah libat kewangan pimpinan - pimpinan tersebut sama ada secara langsung mahupun tidak langsung contohnya melalui syarikat yang berkepentingan mereka.
juga boleh klik
Posted: 12 Mar 2013 08:05 PM PDT
So believes former private investigator P Balasubramaniam, who was on March3warded in the cardiac unit ofaprivate hospital in Selangor after being diagnosed with clogged coronary vessels. The former private investigator is expected to undergoaheart bypass surgery in the coming weeks.
Balasubramaniam, 53, Better known as PI Bala, believes he could have died fromaheart attack at any time after leaving India to return home last month to campaign for opposition coalition Pakatan Rakyat, or during the many speaking engagements scheduled for him. His packed ceramah sessions over the past few weeks showcased his involvement in two contradictory statutory declarations (SD) and the alleged involvement of Najib Abdul Razak and those close to the prime minister in the murder of Mongolian national Altantuya Shaariibuu and an alleged subsequent cover-up.
Bala discovered his heart condition duringamedical check-up after experiencing breathing difficulties at the speaking engagements in both Kota Bharu and Kuala Lumpur. Consequently, he had to miss ceramah sessions planned in Johor and Sabah.
Bala is strong in his faith that "the man upstairs" and the spirit of the murdered Mongolian woman still needed him to continue with his crusade. He told told Malaysiakini in an exclusive interview on Monday, "Every year, on Oct 19, I pray for her. I hope one day justice will be done."
The former police officer who servedastint in the Special Branch said, "I want justice not only for Altantuya, but also for the two UTK (Unit Tindakan Khas or Special Operations Force) guys. You know how the UTK works, under instructions."
Two officers from the UTK, an elite police force, were accused, tried and convicted of the murder of Altantuya (left). They were sentenced to death and have appealed. The matter is still pending in court.
"We cannot simply send two innocent policemen to the gallows. Let us change the government, (because) once changed, the case will be reopened. Then we will know who is guilty, who is not guilty. If the government is not going to be changed, we won't see the truth," Bala argued.
Asked if well-connected carpet trader Deepak Jaikishan, who was directly involved with Bala's second SD saga, had contacted him, the former private eye said he had "heard nothing" from Deepak who also came out admitting to his own involvement in the saga, linking Najib and his close confidantes to the 2006 murder of the Mongolian translator and alleged cover-up.
Yaser Sheikh Abd Rahman dan Sani Md Shah antara yang mewakili SAMM berada
di Ibupejabat Utusan Melayu untuk mendapatkan akuan terima Notis Tuntutan
Ketua Penyelarasnya che'GuBard Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) telah bertindak menuntut gantirugi berbentuk pampasan dari Utusan Malaysia hari ini dengan jumlah RM5 juta di atas fitnah yang telah dilemparkan.
Utusan Malaysia sebelum ini telah menyiarkan sebuah rencana bertarikh 14.01.2013 di atas tajuk "Medan Perah Duit Rakyat". Rencana tersebut disiarkan di dalam portal Utusan Online yang boleh diakses di alamat berikut;
Notis juga itu menamakan dua responden iaitu Ketua Pengarang Utusan sebagai penama pertama dan juga Mohd Asron Mustapha yang juga penulis rencana sebagai penama kedua.
If fear and panic rules the human heart..do not be cowered.
Make haste to respond in the best possible manner..
The effective way is to sembahyang Tahajjud..at least..
Otherwise some Quran reading will beabonus.. well, not likely because the eyes are so shakey at that lovely sleeping hour.
O nothing is impossible..just do it!
Me eyes are beginning to buckle now..Ahoy!
The result ofalate heavy dinner when the plan earlier was to go onadiet!
Being spiritually ambitious is absolutely wonderful.
Even if it is not smoothly carried out as plotted, Allah will always lendahand to make it happen..
Posted: 12 Mar 2013 07:35 AM PDT
The youth of today are always on the move and quick to change. In short, they are DYNAMIC! Hence, the name of this design. The design speaks for itself - one that embodies the aspirations and attitude of the youth of today!
Posted: 12 Mar 2013 06:29 AM PDT
Source မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၂ M-Media ဇာဏီ သံတွဲမြို့အား ဆူပူရန် လှုံ့ဆော်နေမှုအပေါ် သမ္မတကြီးထံသို့ တိုင်ကြားစာပေးပို့
ရန်ကုန် ။ ။ ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားဘဲ ခေတ်အဆက်ဆက် အေးချမ်းစွာနေလာခဲ့သည့် သံတွဲမြို့နယ်တွင် ယခု ၂၀၁၃-ခု မတ်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကလေးများကို စာမေးပွဲအခန်း သီးသန့်ခွဲဖြေရန် ပြည်နယ် အစိုးရမှ ခွဲခြားနေမှုနှင့် စာမေးပွဲအပြီးတွင် လူမှုရေး ဘာသာရေး ဆူပူကြမည်ဟု လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့် နေမှုကို ဖော်ထုတ် အရေးယူ ပေးရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးထံသို့ ဦးလှဝင်း(မင်းညိုငယ်-သံတွဲ)မှ တိုင်စာ တစ်စောင် ပေးပို့တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံတွဲမြို့နယ်သည် ခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းက ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲ အေးချမ်းစွာနေလာခဲ့ပြီး ၁၉၃၀-ပြည့်နှစ် ၁၉၃၈-ခုနှစ် ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ်းတွင်တွင် သံတွဲခရိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခဲ့သည် သခင်ကျော်ရင်၊ သခင်ဗတင်(လက်သီးပုန်း)၊ သခင်ထွန်းစိန်၊ သခင်သန်းမောင်၊ သခင်ညွန့် စတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အမျှော်အမြင်ရှိမှု၊ သဘောထားကြီးမှုတို့ကြောင့် ပြဿနာများမဖြစ်ခဲ့ပဲ အေးချမ်းချစ်ခင်ပြီး စည်းလုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂-ခု ဇွန်လ အရေးအခင်းမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြဿနာ ဖန်တီးသူများ၏ ပယောဂများကြောင့် ၂၀၁၂-ခု အောက်တိုဘာလတွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြဿနာ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ပညာတတ်သိသော သံတွဲ နယ်သားများကြောင့် သံတွဲတွင် မည်သည့်ပြဿနာမှ မဖြစ်ပွားပဲ ညီညွတ်လျက်ပင် ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့ စည်းလုံးချစ်ခင် ညီညွတ်နေသည်ကို အလိုမကျသူလူစုသည် ယခုလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် အစ္စလာမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးများကို ခွဲခြားမှုဖြင့် စာမေးပွဲခန်းများခွဲ၍ ပြည်နယ်အစိုးရမှ ခွဲခြားမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း၊ စာမေးပွဲပြီးပါက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးဆူပူကြမည်ဟု လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်ချိမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ သို့ပါ၍ ယင်းကိစ္စများကို ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးရန်နှင့် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံနေရသော ကျောင်းသားများ၏ ဝေဒနာများကို ဖြေဖျောက်ကုစား၍ ယခင်အတိုင်း ချစ်ခင်မှုပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးပါရန် တိုင်ကြားစာတွင် ထည့်သွင်း တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းတိုင်ကြားစာအား နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့လိပ်မူပြီး၊ အိုလမာအစ္စလာမ် သာသနာ့ပညာရှင်များ အဖွဲ့၊ အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ မော်လ၀ီအဖွဲ့၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူငယ်များ (ဘာသာရေး)အဖွဲ့၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့တို့၏ အဖွဲ့ချုပ်များသို့ မိတ္တူများပေး ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted: 12 Mar 2013 06:26 AM PDT
Taman Sri Bintang resident Angus Ng, 52, said the 200m-link was expected to ease traffic congestion in the area. "The residents have been tolerating the congestion in the area for so many years. We have been asking the Kuala Lumpur City Hall (DBKL) to resolve the problem but were told the land belongs toaprivate owner. Currently, the roads in our neighbourhood are being used by motorists from Kepong to get to Segambut and by motorists from LDP headed to Desa Parkcity.
"Also, there are two schools in the area, SMK Sinar Bintang and SRJK (C) Kepong 3. A new institution is also coming up here. This contributes to the congestion in our neighbourhood, especially during peak hours. After waiting for almost 15 years for this link to be built, we are so relieved it has been approved. I hope it will help disperse traffic," said Ng who has been living in the area for the past 13 years.
Segambut MP Lim Lip Eng said the link road wasaprivately funded project and that works would start at the end of this month. It is expected to be completed in three months. "The road will benefit 5,000 households in the 10 neighbourhoods," he said.
Posted: 12 Mar 2013 04:36 PM PDT
"Jika sekali pun pembangkang memerintah negara mereka tidak akan sebegitu bodoh mahu membiarkan ekonomi negara muflis seperti yang lain sangkakan.
"Saya tak fikir ekonomi negara akan musnah, sama seperti apa yang pernah saya jelaskan kepada beberapa sektor perbankan dan pelabur asing.
"Perkara asasnya kita kena menjaga komuniti pelaburan," katanya kepada pemberita di sini hari ini, selepas menghadiri Bicara Minda 'Survival Ekonomi Melayu' di Kompleks Karangkraf.
Wujud beberapa spekulasi yang meramalkan hutang negara akan bertambah sehingga menyebabkan muflis sekiranya Pakatan mengamalkan dasar ekonomi yang dijanjikan dalam Buku Jingga.
Antaranya penghapusan tol, pengurangan harga minyak, pendidikan percuma serta menurunkan harga kereta.
Musa berpendapat tidak ada pihak yang sanggup dan sengaja membiarkan ekonomi jatuh kerana ia tanggjungjawab selepas diberi mandat oleh rakyat untuk memerintah negara.
"Hasrat mereka (Pakatan) sama seperti yang lain iaitu untuk berkhidmat kepada rakyat.
"Sebab itu mereka bersaing untuk menang dalam PRU dan untuk membuktikan siapa lebih layak," katanya.
Bekas Menteri Dalam Negeri itu juga berkata, semua pihak perlu menerima hakikat tidak mustahil perkara ini akan berlaku dalam realiti dunia politik demokrasi.
Enggan ulas lanjut
Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perincian dasar ekonomi yang ditawarkan Pakatan Rakyat.
Pakatan Rakyat kini giat turun padang memberi penjelasan kepada rakyat tentang tawaran dasar ekonomi yang dirangka bagi meraih sokongan undi semasa PRU 13 nanti.
Manakala di pihak Barisan Nasional (BN) termasuk pemimpinnya menganggap tawaran Pakatan itu mampu menggugat kestabilan ekonomi.
Malah, wujud perang siber di media sosial yang menyiarkan video dan menggelarkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai 'Mr Mansuh'.
Sementara itu, Musa dalam ucapannya menyelar sikap sesetengah ahli politik yang gemar memainkan sentimen perkauman sebagai modal politik.
Beliau menyifatkan tindakan tersebut sebagai langkah terdesak yang akhirnya boleh memusnahkan negara.
Bangkrap politik"Barang siapa guna isu perkauman dia adalah ahli politik yang bankrap.
"Banyak isu yang boleh dibahaskan untuk pembangunan negara selain hanya nak takutkan rakyat dengan isu perkauman," tegasnya.
Sementara itu, beliau yakin Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya mencapai matlamat apabila kemiskinan tegar semua kaum dapat dikurangkan.
Malah beliau berpendapat 30 peratus penglibatan Bumiputera dalam sektor ekonomi juga turut tercapai.
Musa yang juga bekas Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) itu turut menepis persepsi survival ekonomi Melayu kini terancam.
Katanya, perasaan rendah diri boleh berubah sekiranya pemimpin tidak menyalahgunakan peluang yang ada untuk kepentingan politik. -FMT
Cetak dan edarkan kenyataan ini kepada rakyat seluruh negara terutama rakyat kampung yang telah ditipu oleh media massa pro-BN.
Posted: 12 Mar 2013 04:30 AM PDT
Mike Adams, the Health Ranger Editor or Natural News, reported HERE that the U.S. dairy industry has petitioned FDA to approve aspartame as hidden, unlabeled additive in milk, yogurt, eggnog and cream.
Importantly, none of these additives need to be listed on the label. They will simply be swept under the definition of "milk," so that whenacompany lists "milk" on the label, it automatically includes aspartame or sucralose. And if you're trying to avoid aspartame, you'll have no way of doing so because it won't be listed on the label. MORE HERE.
Please leaveacomment if you would like to share your thoughts/responses to this article. Thanks!
Posted: 12 Mar 2013 02:50 AM PDT
Posted: 12 Mar 2013 03:45 AM PDT
THE MALAYSIAN ANIMAL-ASSISTED THERAPY FOR THE DISABLED AND ELDERLY ASSOCIATION or PETPOSITIVE has initiated plans with another non governmental organisation to provide aquarium therapy for residents inalow cost housing area in one of Petaling Jaya's poorest township.
The fish tank will come with an in-built waterfall to provide
Posted: 12 Mar 2013 05:37 AM PDT
Posted: 12 Mar 2013 02:41 AM PDT
Source FB of U Myat Ko
ဖေ့ဘုတ်သူငယ်ချင်းများ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာသာမတူ၊ဝါဒမညီ၊အတွေးအခေါ်ကွဲပြားလို့ ဆဲဆိုပုတ်ခတ် အဟုတ်မှတ်ပြီး သွေးနထင်ရောက်အသိဥာဏ်ပျောက်ပျက် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စည်းလုံးမူပျက်ပြား စစ်အစိုးရ အလိုကျသဘောကိုရောက်ပါသောငြားလည်း အဲဒါပြဿနာမဟုတ်။
ဖေ့ဘုတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ့က အစ္စလာမ်ဘာသာဆရာသခင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့ရဲ့ အမည်နာမတွေ့တပ်ပြီး ဆဲဆိုကြတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာတွေ့ကလည်း မင်းတိုဆဲရင် တို့လည်းဆဲတက်တယ်ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကိုလည်း ပြန်ဆဲကြပါတယ်။
"သူတစ်ပါးကိုးကွယ်ယုံကြည်သည် ဘုရားများကို ဆဲဆိုခြင်မပြုရ။"
(ကုရ်အံ ၆ : ၁၀၈)
ခရစ်ယာန်နဲ့ ဂျူး ဘာသာတွေ့ရဲ့ ဘုရားသခင်တွေ့ကို အစ္စလာမ်က ဆဲဆိုဖို့မပြောနဲ့ အမည်နာမတော်ကြားရင် (အလိုင်စလာမ်) ဆိုပြီး မေတ္တာပို့ကြတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ဂေါတမ အမည်နာမတော်ကြားရင်လည်း (အလိုင်စလာမ်) ဆိုရမယ်ဆ်ိုပြီး မုဖာဆွေရ်ရို ကုရ်အံ ဘွဲ့ရထားသော
ကရုဏာရှင် အကြင်နာရှင် ဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်၏ ဂုဏ်တော်အားဖြင့်-
အစ္စလာမ် သာသနာဝင် ညီအစ်ကို မောင်နှမများနဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ- ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တွေဟာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံရဲ့ မိန့်မှာသွန်သင်ချက်တွေကို တတ်သိသမျှ နှလုံးပိုက် လိုက်နာသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ် ရေးကိုယ်တာ သီလများဖြစ်တဲ့ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းနဲ့ အချို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမယ့်- ပညတ်သီလတစ်ချို့ကို မလိုက်နာနိုင်သေးသူတွေတောင်မှ အထူးသဖြင့် ရစူလ် (ဉာဏ်စဉ်ဆောင် ကိုယ်တော်များ) နဗီ (သတင်းဆောင် ကိုယ်တော်များ) ရဲ့ အမည်နာမကို ကြားလိုက်မိရင်၊ သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် နှုတ်မှ ပြောဆိုမိရင် (အာလိုင်းယ်ဆလာမ်)- ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေလို့ မေတ္တာပို့ရတာ နှုတ်ကျိုးနေပါတယ်။ မူဆလင် အရက်သမား ပါးစပ်ကတောင်- (အာလိုင်းယ်ဆလာမ်) ဆိုတဲ့ မေတ္တာမပို့ဘဲ ဘယ် ဉာဏ်စဉ်ဆောင်၊ သတင်းတော်ဆောင် ရဲ့ အမည်နာမကိုမှ မခေါ် မပြောဘူးဆိုတာ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တိုင်း သိပါတယ်။ ဒီထက်မက- မူဆလင် အသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ နီးစပ်သူတိုင်းကလည်း (အာလိုင်ယ်ဆလာမ်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားမလည်သော်လည်း ကြားဘူးကြပါတယ်။
ဒါဟာ- ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုပါ။ အစ္စလာမ်သာသနာမှာ လူသားထဲက အမြင့်မြတ်ဆုံး ဉာဏ်စဉ်ကို ခူးဆွတ် ခွင့်ရသူအား ရစူလ်လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အစ္စလာမ်တွေရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး နောက်ဆုံးပွင့်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ ကိုယ်တော် မုဟမ္မဒ် (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ကိုလည်း ဉာဏ်စဉ်ဆောင်၊ သတင်းတော်ဆောင် အဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ ကိုယ်တော်ယေရှု (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ကိုလည်း ဉာဏ်စဉ်ဆောင် သတင်း တော်ဆောင်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ကိုယ်တော်ဂေါတမ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ကိုလည်း ဉာဏ် စဉ်ဆောင် သတင်းတော်ဆောင်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဉာဏ်စဉ်ဆောင် သတင်းတော်ဆောင်တွေ ကြားမှာ ဘယ်သူက မြတ်တယ်။ ဘယ်သူက နိမ့်တယ်လို့ ခွဲခြားခြင်း မပြုဘို့ ကုရ်အံကျမ်းတော်ရဲ့ (၂း၂၈၅) မှာ သွန်သင်ထားသလို၊ အစ္စလာမ်လို့ ခံယူသူတိုင်းက ထိုကိုယ်တော်များ ကြား အဆင့်အတန်း ခွဲခြားခြင်း မပြုပါလို့ သစ္စာခံယူထားရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ- အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေ အကြား အနည်းငယ် ရှင်းစရာ ရှိတာက၊ ကိုယ်တော်ဂေါတမ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တွေဟာ၊ ကိုယ်တော်မူဆာ (ဂျူးလူမျိုးများအတွက် ပွင့်ပေါ်ခဲ့သော ဉာဏ်စဉ်ဆောင်၊) ကိုယ်တော် ယေရှု (ပျောက်ဆုံးသွားသော ဂျူးမျိုးနွယ်များအတွက် ပွင့်ပေါ်ခဲ့သော ဉာဏ်စဉ်ဆောင်တို့ရဲ့ အမည်နာမတွေကို ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်မူဆာရဲ့ အမည်နာမ၊ ကိုယ်တော် ယေရှု (ကုရ်အံပါ အမည် အီဆာ) ၏ အမည်နာမ ကို ကြားရတိုင်း၊ ခေါ်ဆိုတိုင်းမှာ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) လို့ ရွတ်ဆိုပြီးသား နှုတ်ကျိုးနေပါတယ်။ ကိုယ်တော် ဂေါတမ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ရဲ့ အမည်နာမက အစ္စလာမ် သာသနာဝင် တွေ အတွက် ခပ်စိမ်းစိမ်း ဖြစ်နေပါတယ်။ များသောအားဖြင့်__ ကိုယ်တော်ဂေါတမ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ဆိုရင် အစ္စလာမ်က ဖေါ်ပြတဲ့ ဉာဏ်စဉ်ဆောင်ရယ်လို့ တောင် မသိကြဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်ရတာက-
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာလွှမ်းမိုးရာ ဒေသများကို ရောက်လာတဲ့ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တွေဟာ အာရ်ဗီမူရင်းကို နားလည်မှု အား နည်းခြင်း။
(၂) နားလည်သူများ ရှိသည့်တိုင် အချို့သော အစိုးရများက ဘာသာပြန်ခွင့် မပြုခြင်း (စာပေစီစစ်ရေးမှ တည်းဖြတ်ခြင်း) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့- ကိုယ်တော်ဂေါတမ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ)ရဲ့ အမည်နာမကို ကျမ်းမြတ် ကုရ်အံမှာ َဿာလ်ကဖ်လိ လို့ ၂၁း၈၅ န့ဲ ၃၈း၄၈ မှာ- (၂) ကြိမ်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဿာလ်ကဖ်လိ လို့ ဆိုတဲ့ ဉာဏ်စဉ် ဆောင်ရဲ့ အမည်နာမကို သမ္မာကျမ်းမှာ ဖြစ်စေ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း သမိုင်းမှာ ဖြစ်စေ မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီလို အရှေ့အလယ်ပိုင်း သမိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်လို့ မရတဲ့ ဉာဏ်စဉ်ဆောင်တွေရဲ့ အမည်နာမကို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံ ကဖေါ်ပြတိုင်း အမည်နာမမှာ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဖေါ်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ- ကုရ်အံ ၁၈း၈၃ မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ ဿီးလ်ကာရ်နိုင်းရ် ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရ်ဗီစကားမှာ َ ذا ဿာ၊ ذي ဿီ၊ ذو ဿူ ဆိုတာ- ပိုင်ရှင်၊ ပြည့်ရှင်မင်း၊ စိုးပိုင်သူ လို့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တိကျစွာ ရည်ညွှန်းတဲ့ နေရာ၊ ဒေသ၊ လူ၊ ၀တ္ထု တွေရှေ့မှာ الْ အလက်ဖ်လမ် (အလ်) တွဲဆက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဿီးလ်ကာရ်နိုင်းရ် (ဿီ-အလ်-ကာရ်နိုင်းရ်) ကို ဆရာတော်ကြီးတွေက ကာရ်နိုင်းန် အရပ်ကို ပိုင်စိုးသော ကာရ်နိုင်းမင်းကြီးလို့ ပြန်ဆိုကြပါတယ်။ ဒီပြန်ဆိုချက်ကို ဘယ်သူကမှ ငြင်းဆန်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဿာလ် ကာဖ်လ်လ်လိ ကိုတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် မောင်လာနာ ယူဆွဖ်အလီရဲ့ ဘာသာပြန်မှာ َဿာလ်ကဖ်လိ ကို ဗုဒ္ဓဂေါတမ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စတင်စဉ်းစားဘို့ လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မောင်လာနာ ယူဆွဖ်အလီက အိန္ဒိယတိုက်သား ဖြစ်တော့ ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့ သမိုင်းကို သိနေတာရယ်၊ အာရဗ်လောကမှာ َဿာလ်ကဖ်လိ ဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာရယ် သိနေလို့ စတင် လမ်းဖွင့် ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာရ်ဗီစကားအရ ဿာလ် ဆိုတာ၊ ပိုင်ရှင်၊ စိုးပိုင်သူ၊ ပြည့်ရှင်မင်း၊ လို့ ဖြစ်တာရယ်၊ ကာဖ်လ်လ်လိ ဆိုတာ ကပိလိလိလ လို့ဖြစ်တာရယ် ပိုပြီးတိကျအောင် ကာဖ်လ်လ်လိ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ ရှေ့က အလ် တွဲဆက်ထားတာရယ်က َဿာလ်ကဖ်လိ သည် ကပိလပြည်မှ ပြည့်ရှင်မင်း (ဗုဒ္ဓ ဂေါတမ) ကို ခေါ်ဆိုကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ အာရ်ဗီစာ၊ အရ်ဗီစကားမှာ ပ အသံ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပ အသံနေရာမှာ ဖ အသံကို သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကပိလိလ ကို အာရ်ဗီလို ကာဖ်လ်လ်လိ လို့ ခေါ်ဆိုတာပါ။ အခုခေတ်အခါမှာ ကပိလိလိလ ဆိုတ့ဲ စကားလုံးအား အာရဗ် တစ်ဦးကို ဖတ်ခိုင်းလိုက်ရင် အဖြေမှန် ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကို သီရိလင်္ကနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံ ညီလာခံမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေရိုဘန်မှ ဆရာတော်ကြီး များ ဖြစ်တဲ့ မောင်လာနာ မုနာဇီးရ် အဟ်စန် ဂီလာနီ ဒေရိုဗန်ဒီ နဲ့ မော်လ၀ီ အဗ္ဗဒူလ် ဘီဒီယာတီ တို့ကလည်း သုတေသန လုပ်ပြီး တင်ပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ သုတေသနမှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံ ၉၅း၁-၃ ထိမှာ ဖေါ်ပြ ထားတဲ့ အရပ်ဒေသတွေ၊ အပင်တွေဟာ ဉာဏ်စဉ်ဆောင်တွေ ပွင့်ပေါ်ရာဒေသကို ညွှန်းပြီး ဂုဏ်ပေးထားကြောင်း အဲ့ဒီမှာ ပညောင်ပင် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ အာရဗ်မှာ ပေါက်တဲ့ အပင် မဟုတ်ဘဲ အိန္ဒိယတိုက်မှာသာ ပေါက်တဲ့ အပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ညောင်ဗောဓိ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဂေါတမကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း– တင်ပြထားပါတယ်။ Wiki မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းတွင်လည်း ၇ ရာစုတွင် အစ္စလာမ် သာသနာသည် အိန္ဒိယသို့ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သောအခါ ဗုဒ္ဓ ဘာသာတို့အား ဂျူးများ၊ ခရစ်ယာန်များကဲ့သို့ ကျမ်းစာရ ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပေးခဲ့သည်။ အလ်ဘီယူနီက ဗုဒ္ဓသည် ဉာဏ်စဉ်ဆောင်တစ်ပါး (ခရစ်ယာန်အသုံးဖြင့် Prophet) တစ်ပါး ဖြစ်သည်ဟု တရားဝင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျမ်းစာရ ဘာသာ တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ပြီ ဆိုကတည်းက အဲ့ဒီဘာသာကို ဦးဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (ဗုဒ္ဓဂေါတမ) ဟာ ဉာဏ်စဉ်ဆောင် ရစူလ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တရားဝင် ၀န်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအားဖြင့် ကျမ်းတော်မှာ လူမျိုးကိုယ်စီအတွက် ဉာဏ်စဉ်ဆောင်တစ်ပါး ရှိခဲ့၏ ဆိုတဲ့ (၁၀း၄၇)၊ သတိပေး ဆုံးမသူ မပွင့်ပေါ်သော လူမျိုးဟု မြေကမ္ဘာတွင် မရှိ- ဆိုတဲ့ (၃၅း၂၄) အရ- လူမျိုးတိုင်းအတွက် ဉာဏ်စဉ်ဆောင် ပွင့်ပေါ် ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာလည်း သဗ္ဗညုဉာဏ်ကိုရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဂေါတမ ခေါ် ကိုယ်တော်ဂေါတမ (ကိုယ်တော့အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေ) ကို ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တွေက တန်ဘိုးထားရပါမယ်။ လေးစားကြည်ညိုရပါမယ်။ ဒါဟာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အံက ချမှတ်သွန်သင်တဲ့ သီအိုရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဉာဏ်စဉ်ဆောင် တစ်ပါးပါးကို ပြစ်မှားမိသော် ကျမ်းတော်ပါ ကျွန်တော်တို့ သစ္စာကတိပြုထားတဲ့ ၂း၂၈၅ ပါ ကတိသီလ ဉာဏ်စဉ်ဆောင်ကိုယ်တော်များ အကြား တစ်ပါးနှင့် တစ်ပါး မခွဲခြားပါဆိုတဲ့ ကတိအား ချိုးဖျက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သစ္စာကတိ သီလပျက်ခြင်း အပြင် ကျွန်တော်တို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီနောင်တွေဖြစ် တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေကိုလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေရာ ရောက်ပါတယ်။ ဉာဏ်စဉ်ဆောင် တစ်ပါးကို လေးစား တန်ဘိုး ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ချိုးဖေါက်သူ မှန်သမျှမှာ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးတွေ ကောင်းလာစရာ အကြောင်း မရှိဘူး ဆိုတာ ကိုလည်း- နားလည်စေလိုပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ- အားလုံး ဉာဏ်စဉ်ဆောင်များ အပေါ် လေးစားတန်ဘိုး ထားတတ်ပါစေလို့– ဆုတောင်း မေတ္တာပို့လျှက်-။
အလျှဉ်းသင့်သလို့- အရှေ့တိုင်း အစ္စလာမ် သာသနာဝင် ကမ္ဘာကျော် ကဗျာဆရာကြီး အလာမာဟ် ဒေါက်တာ အက္ကဘာရ် က ဗုဒ္ဓဂေါတမအတွက် ရင့်ကျူးဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ဘာသာပြန် ပေးလိုက်ပါတယ်။　ဗုဒ္ဓအား အောက်မေ့တသ
ဇာတိမြေမှာ- မြတ်ပန်း မုဒြာ
(မုဖာဆွေရ်ရို ကုရ်အံ။ ဘီအေ မြန်မာစာ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) အေ-အေ မီဒီယာ မားကက်တိန်း (နယူးယောက်၊
အမေရိကန်) Buddhism, Christianity & Islamic Scholar.
ဗုဒ္ဓနဲ့ပက်သက်ပြီး အခြားဆရာကြီးတွေ့ရဲ့ စာအုပ်တွေ့ရှိသော်လည်း ထိုဆရာကြီးတွေ့က လမ်းဖွင်ပေးထားတယ်အတွက် ဒွိဟဖြစ်မှာဆိုလို လမ်းလျှောက်ပြတယ် ဆရာကြီးဦးဌေးလွင်ဦးရဲ့ စာအုပ်က ဒိဌဖြစ်တယ်အတွက် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုလက်ခံ မနှစ်သက်ရင်ငြင်းပယ်တာလဲ အစွန့်ရောက်ဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အမျိုးပျောက်မှာ မကြောက် လမ်းမှားရောက်မှာကြောက်တက်သူ။
Posted: 12 Mar 2013 02:04 AM PDT
Ketua Polis Negara sendiri akui Pakatan Rakyat ada kemungkinan besar tawan Putrajaya, dedah Pengerusi Biro Penerangan KEADILAN, Dr Muhammad Nur Manuty.
Kenyataan Ismail itu dipetik dari ucapannya dalam Kursus Tarbiah di Universiti Islam Antarabangsa (UIA) di hadapan 200 orang profesor senior kira-kira tiga minggu lalu.
"Kursus Tarbiah itu turut dihadiri Tun Mahathir, dia (Ismail) beritahu, Pakatan Rakyat ada potensi besar ke Putrajaya dan keadaan akan jadi huru hara.
"Beliau terlupa, bila kita (PR) kata kita nak tawan putrajaya, kita dah sediakan persediaan rapi, kita ada empat orang general terlatih sebagai penasihat keselamatan kita
"Isu huru-hara hanya dicipta untuk takutkan rakyat, tapi tak apalah, yang penting ketua polis sendiri akui kita mampu tawan putrajaya," Katanya.
"Pelan perancangan strategik telah dirancang oleh pihak polis.
Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, macam mana polis nak bawa dia (Anwar) ke Istana Negara untuk angkat sumpah, itu pun sudah ditunjukkan pada saya," katanya.
Posted: 11 Mar 2013 11:30 PM PDT
According to THIS SITE,aPBS' "Nova" program on January 23, entitled "Rise of the Drones," featured Dr. John Antoniades, technical group director for ISR Exploitation Technologies in the Technology Solutions business area.
The show explored the cutting edge technologies that are writinganew chapter in aviation history, including ARGUS-IS, or the Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance Imaging System, which flies aboard an unmanned helicopter. Developed collaboratively by Technology Solutions and ISR Solutions, this 1.8-Gigapixel camera has the most powerful real-time, high-resolution video sensor, enabling unprecedented capability in finding, tracking and monitoring events in real time.
According to an email that Angela forwarded to me (author unknown), "This isapowerful super Surveilance Camera installed on aircraft. If you have watched the TV series "Person of Interest" you may have thought that this was science fiction but it is here right now. It is amazing and yet frightening at the same time. Watch and be amazed."